13 yakanakisa WordPress kumhara peji plugins ye2021
FR : https://www.hebergementwebs.com/site-internet/13-meilleurs-plugins-wordpress-de-page-de-destination-pour-2021
EN : https://www.hebergementwebs.com/website/13-best-wordpress-landing-page-plugins-for-2021
ES : https://www.hebergementwebs.com/sitio-de-internet/los-13-mejores-complementos-de-pagina-de-destino-de-wordpress-para-2021
CY : https://www.hebergementwebs.com/gwefan/13-best-wordpress-land-page-plugins-for-2021
CS : https://www.hebergementwebs.com/webová-stránka/13-best-wordpress-landing-page-plugins-pro-2021
FY : https://www.hebergementwebs.com/webside/13-beste-wordpress-laning-pagina-plugins-foar-2021
BE : https://www.hebergementwebs.com/вэб-сайт/13-найлепшых-убудоў-wordpress-мэтавай-старонкі-на-2021
FI : https://www.hebergementwebs.com/verkkosivusto/13-parasta-wordpress-aloitussivulaajennusta-vuodelle-2021
GA : https://www.hebergementwebs.com/suíomh-gréasáin/13-best-wordpress-land-page-plugins-for-2021
HE : https://www.hebergementwebs.com/אתר-אינטרנט/13-התוספים-הטובים-ביותר-של-wordpress-page-landing-plugins-for-2021
CO : https://www.hebergementwebs.com/situ-web/13-best-wordpress-landing-page-plugins-per-2021
DE : https://www.hebergementwebs.com/webseite/13-best-wordpress-landingpage-plugins-fur-2021
AM : https://www.hebergementwebs.com/ድህረገፅ/13-ምርጥ-የ-wordpress-ማረፊያ-ገጽ-ተሰኪዎች-ለ-2021
BS : https://www.hebergementwebs.com/web-stranica/13-najboljih-dodataka-za-wordpress-odredisne-​​stranice-za-2021
FA : https://www.hebergementwebs.com/سایت-اینترنتی/13-بهترین-افزونه-صفحه-وردپرس-صفحه-فرود-برای-2021
BG : https://www.hebergementwebs.com/уебсайт/13-най-добри-wordpress-целеви-страници-приставки-за-2021
HT : https://www.hebergementwebs.com/sit-entènèt/13-pi-bon-wordpress-aterisaj-paj-grefon-pou-2021
HR : https://www.hebergementwebs.com/web-stranica/13-najboljih-wordpress-odredisnih-stranica-dodataka-za-2021
CA : https://www.hebergementwebs.com/lloc-web/13-best-wordpress-landing-page-plugins-for-2021
HU : https://www.hebergementwebs.com/weboldal/13-legjobb-wordpress-celoldal-plugin-2021-hez
ID : https://www.hebergementwebs.com/situs-web/13-plugin-halaman-arahan-wordpress-terbaik-untuk-2021
AF : https://www.hebergementwebs.com/webwerf/13-beste-wordpress-landing-bladsy-inproppe-vir-2021
AR : https://www.hebergementwebs.com/موقع-انترنت/أفضل-13-مكونًا-إضافيًا-للصفحة-المقصودة-ووردبريس-لعام-2021
HA : https://www.hebergementwebs.com/gidan-yanar-gizo/13-mafi-kyawun-kalma-saukowa-shafi-plugins-don-2021
EL : https://www.hebergementwebs.com/δικτυακός-τόπος/13-best-wordpress-landing-page-plugins-for-2021
BN : https://www.hebergementwebs.com/ওয়েবসাইট/-2021-এর-জন্য-13-সেরা-ওয়ার্ডপ্রেস-ল্যান্ডিং-পৃষ্ঠা-প্লাগইনগুলি
EO : https://www.hebergementwebs.com/retejo/13-plej-bonaj-wordpress-surterig-pagaj-kromajoj-por-2021
GU : https://www.hebergementwebs.com/વેબસાઇટ/2021-માટે-13-શ્રેષ્ઠ-વર્ડપ્રેસ-ઉતરાણ-પૃષ્ઠ-પ્લગઈનો
EU : https://www.hebergementwebs.com/webgunea/13-best-wordpress-landing-page-plugins-2021rako
ET : https://www.hebergementwebs.com/veebisaidil/13-parimat-wordpress-maandumislehe-pistikprogrammi-aastaks-2021
GL : https://www.hebergementwebs.com/páxina-web/13-best-wordpress-landing-page-plugins-for-2021
GD : https://www.hebergementwebs.com/làrach-lìn/13-best-wordpress-land-page-plugins-for-2021
AZ : https://www.hebergementwebs.com/veb-sayt/2021-ci-il-ucun-ən-yaxsi-13-wordpress-acilis-səhifəsi-plaginləri
NL : https://www.hebergementwebs.com/website/13-beste-wordpress-landingspagina-plug-ins-voor-2021
NO : https://www.hebergementwebs.com/nettsted/13-beste-wordpress-destinasjonsside-plugins-for-2021
KA : https://www.hebergementwebs.com/ვებსაიტი/20-ე-საუკეთესო-wordpress-landing-page-plugins-for-2021
IT : https://www.hebergementwebs.com/sito-web/i-13-migliori-plug-in-per-la-pagina-di-destinazione-di-wordpress-per-il-2021
OR : https://www.hebergementwebs.com/ୱେବସାଇଟ୍-|/13-ଶ୍ରେଷ୍ଠ-ୱାର୍ଡପ୍ରେସ୍-ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ-ପୃଷ୍ଠା-ପ୍ଲଗଇନ୍-2021-ପାଇଁ-|
RW : https://www.hebergementwebs.com/urubuga/13-nziza-ijambo-press-kugwa-page-plugins-ya-2021
PL : https://www.hebergementwebs.com/stronie-internetowej/13-najlepsze-wtyczki-do-strony-docelowej-wordpress-na-rok-2021
NY : https://www.hebergementwebs.com/tsamba-la-webusayiti/13-mawu-abwino-otsikira-tsamba-mapulagini-a-2021
PT : https://www.hebergementwebs.com/local-na-rede-internet/13-best-wordpress-landing-page-plugins-para-2021
SD : https://www.hebergementwebs.com/ويب-سائيٽ/13-بهترين-ورڈپریس-لينڊنگ-صفحو-پلگ-ان-2021-لاءِ
ML : https://www.hebergementwebs.com/വെബ്സൈറ്റ്/2021-നുള്ള-13-മികച്ച-വേർഡ്പ്രസ്സ്-ലാൻഡിംഗ്-പേജ്-പ്ലഗിനുകൾ
LV : https://www.hebergementwebs.com/vietne/13-labakie-wordpress-galvenas-lapas-spraudni-2021.-gadam
LT : https://www.hebergementwebs.com/interneto-svetainė/13-geriausiu-„wordpress-landing-page-plugins“-2021-m
KO : https://www.hebergementwebs.com/웹-사이트/13-best-wordpress-landing-page-plugins-for-2021
RO : https://www.hebergementwebs.com/site-ul-web/13-best-wordpress-landing-page-plugins-for-2021
RU : https://www.hebergementwebs.com/Веб-сайт/13-лучших-плагинов-целевой-страницы-для-wordpress-на-2021-год
IS : https://www.hebergementwebs.com/vefsíðu/13-bestu-wordpress-lendingar-siðu-viðbætur-fyrir-2021
SI : https://www.hebergementwebs.com/වෙබ්-අඩවිය/13-හොඳම-වර්ඩ්ප්‍රෙස්-ගොඩබෑම-පිටුව-ප්ලගීන-2021-සඳහා
KN : https://www.hebergementwebs.com/ಜಾಲತಾಣ/2021-ಕ್ಕೆ-13-ಅತ್ಯುತ್ತಮ-ವರ್ಡ್ಪ್ರೆಸ್-ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್-ಪುಟ-ಪ್ಲಗಿನ್‌ಗಳು
MR : https://www.hebergementwebs.com/संकेतस्थळ/2021-साठी-13-सर्वोत्कृष्ट-वर्डप्रेस-लँडिंग-पृष्ठ-प्लगइन
PA : https://www.hebergementwebs.com/ਵੈਬਸਾਈਟ/-2021-ਲਈ-13-ਸਰਬੋਤਮ-ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ-ਲੈਂਡਿੰਗ-ਪੇਜ-ਪਲੱਗਇਨ
LB : https://www.hebergementwebs.com/websäit/13-bescht-wordpress-landung-sait-plugins-fir-2021
PS : https://www.hebergementwebs.com/ویب-پاه/د-2021-لپاره-13-غوره-ورډپریس-د-ځمکو-پا-pageې-پلگ-انونه
MT : https://www.hebergementwebs.com/websajt/13-l-ahjar-wordpress-landing-page-plugins-ghall-2021
JA : https://www.hebergementwebs.com/ウェブサイト/13-best-wordpress-landing-page-plugins-for-2021
MS : https://www.hebergementwebs.com/laman-web/13-terbaik-wordpress-landing-page-plugins-for-2021
MY : https://www.hebergementwebs.com/ဝဘ်ဆိုက်/1321-အကောင်းဆုံးစကားလုံးများ-လေယာဉ်-စာမျက်နှာ-ပလပ်ဂင်များ-အတွက်-2021
KK : https://www.hebergementwebs.com/веб-сайт/2021-жылға-арналған-ең-жақсы-wordpress-қонуға-арналған-бет-плагиндер
KY : https://www.hebergementwebs.com/веб-сайт/2021-жылга-карата-эң-мыкты-wordpress-конуу-барагы-плагиндер
MN : https://www.hebergementwebs.com/вэбсайт/2021-оны-хамгийн-шилдэг-13-wordpress-буултын-хуудасны-залгаасууд
TR : https://www.hebergementwebs.com/İnternet-sitesi/2021-icin-en-iyi-13-wordpress-acilis-sayfasi-eklentisi
VI : https://www.hebergementwebs.com/trang-mạng/13-best-wordpress-landing-page-plugins-for-2021
SO : https://www.hebergementwebs.com/bogga/13-ugufiican-wordpress-degida-bogga-plugins-for-2021
SV : https://www.hebergementwebs.com/hemsida/13-basta-wordpress-malsidan-plugins-for-2021
UG : https://www.hebergementwebs.com/توربېكەت/2021-يىلدىكى-13-ئەڭ-ياخشى-سۆز-بېسىش-قونۇش-بەت-قىستۇرمىلىرى
ZU : https://www.hebergementwebs.com/iwebhusayithi/i-13-best-wordpress-landing-page-plugins-ye-2021
SK : https://www.hebergementwebs.com/webovú-stránku/13-najlepsich-wordpress-landing-page-plugins-pre-2021
YO : https://www.hebergementwebs.com/aaye-ayelujara/13-ti-o-dara-julọ-ọrọ-ọrọ-ibalẹ-oju-iwe-awọn-afikun-fun-2021
XH : https://www.hebergementwebs.com/iwebhusayithi/i-13-ebalaseleyo-yegama-lokungena-kwiphepha-leeplagi-ze-2021
TE : https://www.hebergementwebs.com/వెబ్‌సైట్/20-21-కోసం-13-ఉత్తమ-wordpress-ల్యాండింగ్-పేజీ-ప్లగిన్లు
UR : https://www.hebergementwebs.com/ویب-سائٹ/2021-کے-لئے-13-بہترین-ورڈپریس-لینڈنگ-پیج-پلگ-ان
TT : https://www.hebergementwebs.com/сайты/13-иң-яхшы-wordpress-десант-бит-плагиннар-2021-өчен
ZH-TW : https://www.hebergementwebs.com/網站/13個2021年最佳wordpress登陸頁面插件
SQ : https://www.hebergementwebs.com/faqe-në-internet/13-shtesat-me-te-mira-te-wordpress-landing-page-per-2021
UK : https://www.hebergementwebs.com/веб-сайт/13-кращий-плагін-для-wordpress-цільової-сторінки-на-2021
TA : https://www.hebergementwebs.com/இணையதளம்/20-க்கு-13-சிறந்த-வேர்ட்பிரஸ்-தரையிறங்கும்-பக்கம்-செருகுநிரல்கள்
SL : https://www.hebergementwebs.com/spletna-stran/13-najboljsi-wordpress-ciljna-stran-vticniki-za-2021
ST : https://www.hebergementwebs.com/webosaete/13-best-wordpress-landing-page-plugins-ea-2021
SW : https://www.hebergementwebs.com/tovuti/13-bora-neno-la-kutua-ukurasa-plugins-za-2021
UZ : https://www.hebergementwebs.com/veb-sayt/2021-yil-uchun-13-eng-yaxshi-wordpress-ochilish-plaginlari
Wakagadzirira kugadzira zvakawanda zvinotungamira? Iwe unoda here kuwedzera yako yekutengesa mari?
Iyo yakasarudzika, inoteerera, uye yakagadzirirwa-yakagadzirirwa peji yekumhara inogona kukubatsira iwe kuita izvi.
Asi kugadzira peji rinoshanda uye rinobata rinomhara rinogona kukurumidza kuita chinhu chinodhura kana iwe usina maturusi akakodzera ebasa racho. Nhau dzakanaka ndedzekuti kana iwe uine WordPress webhusaiti, iwe unogona kusarudza kubva kune akati wandei ekumhara peji zvinangwa WordPress plugins
kukubatsira iwe nekukurumidza uye musina musanganiswa kuvaka yakanaka uye inehunyanzvi webhusaiti.
Mune ino chinyorwa, isu tichavhara akanakisa WordPress plugins aunogona kushandisa kugadzira zvakanaka-zvakagadziriswa uye zvine chekuita mapeji ekumisikidza yewebsite yako, blog kana chitoro mumutsara .
Ndeipi peji yekumhara muWordPress?
Iyo peji rekumhara reWordPress iro pejiWebhu kuti vashanyi vako vanotungamirirwa kwairi pavanotsvaga bhizinesi rako kuburikidza neURL kana injini yekutsvaga. Peji yako yekumhara inofanira kugamuchira vashanyi uye kuvabatsira kufamba saiti yako (kunyorera, kudzidza zvakawanda, kutenga, kuwana rubatsiro, bata mumiriri, nezvimwewo).
Heino muenzaniso wekuti peji rinomhara reWordPress ringaite sei.
Mufananidzo sosi yemufananidzo
Mune uyu muenzaniso, iyo peji yekumhara ine yekufona kune chiito chiri pamberi uye nepakati uye pamusoro pechipfuva. Pazasi iwe unowana ruzivo rwune chekuita nezve zvigadzirwa zveKambani uye masevhisi pamwe neakateedzana ezvinongedzo zvinotungamira vashanyi kune mamwe mapeji ewebhu. Ipo peji rako rekumhara ringaite senge iri, pane mikana isingaperi iwe yaunogona kufungidzira nekugadzira kana uchigadzira imwe.
Uye, kugadzira kumhara mapeji kuri nyore kana iwes vane iyo chaiyo plugin. Asi, iro rakakodzera WordPress plugin rako rinogona kunge risiri rakaenzana kune wese munhu. Ndosaka taisa pamwechete tsananguro pfupi yekuti nei uchifanira kunge uchishandisa zvishandiso izvi pamwe nezvimwe zvezvinhu zvakakosha zvekutarisa kana uchisarudza peji rekumhara peji.
Sei uchishandisa WordPress kumhara peji plugin?
Mhinduro pfupi ndeyekuti, inokusevha nguva. Iwe unogona kukurumidza kuwedzera zvinhu kumapeji uchishandisa dhonza uye kudonhedza vavaki, zvakafanana nemuenzaniso uri pazasi.
Iwe hauna kukodha chiitiko? Hauna kumbogadzira peji rewebhu muhupenyu hwako? Hapana dambudziko. Uine peji rekumhara peji, haufanire kuziva kodhi kana kuhaya mugadziri wewebhu kuti agadzire ese ako mapeji. Zvishandiso izvi zvinokupa iwe yakatsanangurwa matemplate aunogona kushandisaUnogona kushandisa sepokutangira kuti usatange kubva pakutanga. Kubva ipapo iwe unogona kugadzirisa peji rako uchishandisa kudhonza uye kudonhedza uye riite kuti ritaridze zvaunoda
- hapana kukodha kunodiwa.
Izvo zvataurwa, haasi ese WordPress plugins akagadzirwa akaenzana. Zvimwe zvine zvakasarudzika maficha uye sarudzo dzekutsigira dzinovaita kuti vafarirwe kupfuura vamwe. Kuti uve nechokwadi chekuti unosarudza iyo yakakodzera yako webhusaiti, ngatiendei pamusoro pezvimwe zvinhu zvaunofanira kutsvaga mune yakanaka yekumhara peji plugin.
Chii chekutarisa muiyo WordPress kumhara peji plugin
Iyo yakanaka WordPress kumhara peji plugin inofanira kuve neanotevera maitiro:
En Zvichienderana nekureruka kwako kwekuvaka mapeji ewebhu, ichi chichava chinhu chakakoshesa kutsvaga mupepa rekumhara peji. Kana iwe usina chero ruzivo rwekuvandudza webhu, iwe uchazoda kusarudza anzwisisa uye nyore kushandisa plugin. Iwe ungangoda chimwe chinhu nekukweva uye kudonhedza muvaki uye yakawanda sarudzo dzekutsigira kana ukabatika.
Sezvatakambotaura, mikana yekugadzira peji rekumhara inenge isingaperi. Isu tinoti "potse" nekuti izvo zvinongogumira idanho rako rezviitiko uye kugona kwe plugin iwe yauri kushandisa. Iwe unoda kuve nechokwadi chekuti urikushandisa yakajairika plugin, kuti iwe ugone kushandura matemplate uye nekuwedzera maficha sezvaunoda uye ugadzire peji rekumhara rinotaridzika chaizvo sezvawafungidzira.
SEO-Shamwari Iyo yakanaka yekumhara peji haina kunaka kana injini dzekutsvaga dzisingaiwane. Ndosaka iwe uchida iyo
WordPress plugin. Aya mapulagi anowedzera zvemukati zvemukati zvekutsvaga kuti vashanyiinogona kuwana nyore nyore webhusaiti yako pavanotsvaga yako brand online.
Iwo akanakisa ekumhara peji plugins anopa arsenal yezvinhu uye maficha iwe aunogona kuwedzera kune yako webhusaiti. Izvi zvinogona kubatsira chaizvo kana iwe usina yakawanda yekukodha ruzivo uye uchida kukurumidza kugadzirisa pane kutsvagisa maitiro ekugadzira akasiyana ewebhu zvinhu.
Zvino zvatava kuziva nemhando idzi dzemapulagini, ngatiendei pamusoro pedzimwe dzakanakisa peji rekumisikidza peji plugin dzinowanikwa kune yako WordPress saiti.
Wepamusoro WordPress Kumhara Peji Mapulagi
Kuvaka peji rekumhara rakanangana neWordPress uchishandisa plugins - heano mamwe anozivikanwa kwazvo. 1.
Neanopfuura mamirioni maviri anoshanda ekuisirwa, Elementor ndeimwe yemapulagi anozivikanwa pane WordPress.Iyo plugin inosanganisira yekuzvuva uye yekudonha anovaka, mhenyu mhariri, uye nekukurumidza
peji mutoro nguva - chikamu chayo chiri chakakonzerwa neElementor kodhi yakachena.
Elementor zvakare inokupa iwe Elementor yakanaka kune avo vari kungotanga newebhusaiti yavo asi vasingade kutanga kubva pakutanga. Iyo inoshandisa-inoshamwaridzika uye inoita kuti webhu dhizaini ive yakasununguka chiitiko kune wese munhu kunyangwe iwe uri webhu mugadziri kana kwete.
Mutengo: 49 $ / gore
Rinobudirira Rakavakwa rinopa matemplate anopfuura mazana maviri nemakumi mashanu ekugadzira peji rekumisikidza pasina kukodha. Iyo yekudhonza uye yekudonha anovaka inoshandisa "bhatani rekugadzirisa" chimiro icho chinokutendera iwe kunyatso gadzirisa iwo mapeji kune ako kufarira mumasekondi. Kune akatiwande marongero ekusarudza kubva, kusanganisira mapeji ekutengesa, mapeji ekumisikidza, webinars, uye zvimwe.
Iyi plugin zvakare inopa akati wandei akakosha ekushandura zvinhu kubatsira rako rekumhara peji kuburitsa inotungamira (semuenzaniso, zvemukati mabhokisi, maCTA mabhatani, zvipupuriro, kuverenga nguva, kupindirana kwevhidhiyo kusanganisa, inoteerera Google Mepu uye system system nyeredzi). muTrive Architect, saka haufanire kutora gumi kana makumi maviri emapulagi akasiyana kuti uchinje kutungamira kune ako kumhara mapeji. Kubudirira muvaki kwakanaka kana iwe uchironga kuvaka anopfuura mashoma mashoma mapeji. Kana chirongwa chako chiri chekuunza rako rese bhizinesi online, iyi plugin ine zvese zvishandiso uye matemplate aunoda kuti ugadzire kwete chete nzvimbo dzekumhara, asi mamwe mawebhu mapeji iwe aunoda kumhanyisa rako bhizinesi
$ 19 / mwedzi 3.
Makadhi mapuraneti anovaka peji reWordPress. Anobatsira kuvashandisavarairidzi ekugadzira mapeji akanaka ane mushandisi-ane hushamwari kudhonza uye kudonhedza interface. Uye, iyi plugin inoshandisa yechinyakare kodhi WordPress kodhi, saka haungasangana nezvakawanda nyaya dzekubatanidza neakasiyana
Iyo maQards plugin inosanganisira anobatsira zvinhu senge mabutiro, mifananidzo, mafonti eGoogle, grids, mamenu, tsoka, uye kunyorera. Chinhu chega chega chinouya neyayo marongero echisarudzo kuitira nyore kugadzirisa uye ivo vanoteerera futi, kuti iwe uve nechokwadi chekuti peji rako rinotaridzika rakakura zvisinei nechero mudziyo. kana bhurawuza iyo yainoratidzwa. Makadhi anopawo kusangana neMailChimp. Kana vashanyi vazadza mafomu pane yako saiti, ruzivo rwavo runotumirwa kune yako MailChimp account. Izvi zvinonyanya kubatsira pakuita email kushambadzira mushandirapamwe otomatiki wakonzerwa nekutumira pamapeji ako ekumhara. Mutengo:
Zvirongwa zvepachena uye zvakabhadharwa zviripo
WP inotungamira mapeji ekubata
WP Kutungamira Kutapa Mapeji kunobatsira vashandisi kugadzira mapeji ekumhara anoyemura nekutenda kune yakavakirwa- mukudhonza uye kudonhedza maficha. Seizvo zita rinoratidzira, iyi plugin yakagadzirirwa kugadzira mapeji ewebhu ayo anoshandura vashanyi vanofarira kuita zvivimbiso zvinotungamira zveboka rako rekutengesa.
WP Kutungamira kunouya ne10 autoresponder kusanganiswa uye anopfuura makumi mapfupi makodhi. Iwo makumi maviri-ekutanga-akavakwa, anodavirira matemplate, uye yekuverengera nguva inoita WP Tungamira iyo "hapana setup inodikanwa" mhando ye plugin. Izvo zvinhu zvewebhu zvinopihwa neiyi plugin zvinosanganisira zvinyorwa, mifananidzo, mabhatani, mafomu, nezvimwe. Chinhu chimwe nechimwe chinoteerera uye hachidi kodhi yekuwedzera. Izvi zvinogadzira WP Kutungamira Kutapa Mapeji ipuru plugin kune avo vanoda yavo yekuenda pejiisu tiri kushanda nekukurumidza sezvazvinogona.
Mutengo: 29 $
Kana uri kuronga kuvaka mapeji anotengesa ekushambadzira zvigadzirwa zvako, iyo WP ProfitBuilder plugin ndeye sarudzo huru kwauri. Izvo hazvipe chete izvo zvishandiso zvaunoda kuti ugadzire yakakwira inoshandura mapeji ekumhara, asi zvakare inokupa iwe iwe neimwe nhungamiro sezvaunogadzira yega yega.
Kune pamusoro pe60 pre-yakavakwa lead lead, kutengesa, uye kushambadzira marongero aunosarudza kubva. Iyo plugin zvakare inoita kuti zvive nyore kugadzira anodavirira uye SEO mapeji ane hushamwari pasina chero coding ruzivo uchishandisa iyo yekudhonza uye kudonhedza interface. WP ProfitBuilder inoenderana ne
Mu staBuilder inotorayakatetepa nzira kune webhu dhizaini. Anodaidza plugin rake "seksikäs" uye anoti zviri nyore kushandisa, "zvinoita sekunge urikutamba mutambo wevhidhiyo. InstaBuilder inoita kuti iwe ugadzire anotarisisa mapeji ane dhizaini dhizaini mumaminetsi. Iyo plugin inopa anodarika zana matemplate uye anoshandiswa-anoshamwaridzika masisitimu ekushandisa anobatsira iwe kugadzira peji rekumhara rinonyatso kusangana nezvinodiwa zvebhizinesi rako. uye bhatani-kubatanidza .Pane zvakare chinonzwisisika analytics ficha iyo inogona kukuudza izvo zviri kushanda pane yako saiti uye chii chisiri.
Mutengo: 77 $
Zviri nyore kugadzira mapeji anobata uye anoteerera anotarisa neOptimizePress.anodada uye anoona shanduko munguva chaiyo neiyo mhariri mhenyu, uye kana iwe uchida dhizaini rubatsiro iwe une anopfuura makumi matatu akavakirwa matemplate aunosarudza kubva pane anopfuura makumi mana zvinhu zvinogadziriswa (semuenzaniso kufambira mberi mabara, kuverenga nguva, uye vhidhiyo uye odhiyo vatambi)
OptimizePress inouya neGDPR inoenderana maficha anoenderana neEuropean data yekuvanzika maitiro. Izvi zvakare zvinobatsira, seOptimizePress inopa Kutarisa kugadzira zvinopfuura kungoisa mapeji? NeOptimizePress, unogona zvakare kugadzira mapeji ekutengesa, ekushambadzira mafiringi, uye shandisa Checkout uye mubhadharo plugin nekushandura webhusaiti yako kuita chitoro chepamhepo.
199 $ / gore
Keyword izita rekuenda peji jenaretaion iyo inobvumidza iwe kuti ugadzire akasiyana ekumhara mapeji evashandisi vakasiyana zvichibva pamazwi akakosha Iyi plugin inoshanda nekubatanidza peji rega rega rekumhara neakasarudzika kiyi kiyi. Zvino, zvinoenderana neshoko rakakosha mushanyi raanoshandisa kuti awane webhusaiti yako, iyo peji rinomhara rinoshandura zvinyorwa zvaro kuti riwedzere kukodzera pakutsvaga kwemushanyi. Mhedzisiro ndeye SEO inoshamwaridzana peji peji. inobatsirawo kugadzira zvakanangwa uye nekugovana zvemunhu zvemukati. Panzvimbo pekufanirwa kugadzira peji nyowani yekumisikidza kuti ienzane nemazwi ese akakosha arikutsvaga vatengi vako, iwe unongoda kugadzira rimwe uye Keyword rinotarisira zvimwe zvese. Chimwe chezvakanakisa maficha eiyi plugin ndechekuti inoenderana neAdWords. Kana iwe uchinge waisa yakanangwa kiyi kiyi muAdWords, Keyword inokuratidza inoenderana inoenderana kumhara peji inoenderana nayo.
Mutengo: $ 18
Avada muridzi zvese maficha uye zvishandiso zvinodiwa kuti ugadzire kutaridzika kwemazuva ano kwewebhusaiti yako. Iyo ine raibhurari hombe yezvakagadzirwa zvinhu uye imwe chete post dhizaini yekuvaka iyo iwe yaunogona kushandisa kugadzira aesthetically inofadza uye inobata kumhara mapeji. Rumwe rudzi rwembiru iwe yaunogona kushandisa neiyi plugin mapeji eportfolio. Kana iwe uchida kuratidza chigadzirwa muchiito kana kugovana yakadzama nyaya yevatengi nevashanyi vako, unogona kushandisa imwe yemazhinji matemplate akagadzirwa ewebhu rako.
Avada inokutendera iwe kugadzirisa yako 404 mapeji kukanganisa Saka kunyangwe kana vashanyi vakasangana nepeji riri kuvakwa kana kushanyira peji risisipo, ivo vanogamuchirwa neshoko remunhu rinovakurudzira kuti varambe vachivhura saiti yako pane kuisiya.
10. Beaver Inovaka
Kana iwe urikuvaka inodarika imwechete webhusaiti, unogona kutarisa Beaver Builder. Nekutengwa kweimwe rezinesi, Beaver Builder inokutendera iwe kuti ugadzire saiti saiti sezvaunoda. Saka iwe unogona kugadzira akawanda mawebhusaiti kana mashoma misiyano yeimwe pasina kubhadhara kune mamwe marezinesi.
Sedzimwe sarudzo pane ino runyorwa, Beaver Inovaka ndeye SEO inoshamwaridzika, inopindura, uye iri nyore kushandisa Inopa vashandisi kudhonza uye kudonhedza muvaki uye inouya nematemplate akati wandei.
Unogona kuteedzera nekuteedzera masitaera pakati penzvimbo dzakasiyana uye nekugadzirisa madingindira akajairika kubva paseti yepasirose yedashboard. Iko kune zvakare sarudzo yeshanduro, kuti iwe ugone kushandura zvirimo zvako uye nekudyidzana nevateereri vakasiyana pasirese.
99 $ 11. Divi
Pane zvinhu zvakawanda zvekuda nezve iyo Divi WordPress peji muvaki, kusanganisira kusanganisira inoteerera kugadzirisa uye yetsika CSS kutonga. Iyo yekudhonza-uye-inodonha anovaka inokuratidza iwe shanduko kune yako saiti munguva chaiyo, uye iwe unogona kusarudza kubva kune akawanda emhando yakasarudzika peji zvinhu.
Chinhu chinotonhorera chakasanganisirwa mune ino peji anovaka isarudzo ye "undo / redo". Unoda kuyedza kutsva kutsva saiti yako, asi haudi kurasikirwa nemamiriro ako azvino? Hapana dambudziko. Iwe unogona kukurumidza kurangarira zvakapfuura shanduro dzesaiti yako kunyangwe mushure mekutumira shanduko nyowani. Zvimwe zvinowedzerwa zvinosanganisira inline mameseji ekugadzirisa, pre-akavaka webhusaiti mapakeji, uye yepasi rose admin peji uko iwe kwaunogona kugadzirisa madingindira uye zvigadziriso zveakawanda masayiti kamwechete.
89 $ / gore 12. IyoadPages
Iyo LeadPages plugin inobvumidza iwe kuti ugadzire mapeji anomhara zviri nyore - inopa anopfuura makumi manomwe akafanotaurwa matemplate ekushandisa uye kugadzirisa. Ese matemplate anoteerera, saka zvisinei kuti rudzii rwechigadzirwa vashandisi vako varipo, iyo peji rekumhara rinotakura zvakaringana pane chero saizi screen.
L eadPages zvakare inouya neyakavakirwa-mukati SEO chimiro kuitira kuti peji yako yekumhara igadziriswe otomatiki enjini dzekutsvaga. Uye LeadPages inopa inoshamisa inokurumidza peji mutoro kumhanya, izvo zvinowedzera kunatsiridza chinzvimbo chako pane maSERP.
LeadPages inotsigira kushambadzira kusingagumi, zvinoreva kuti iwe unogona kugadzira uye kutsikisa semapeji akawanda ekumhara sezvaunoda. Iko kune zvakare gwara rekushandura, iro risingori chete kukuzivisa iwe kana peji risiri kushandurwa.on, asiwo izvo zvaunogona kuita kuvandudza kubatanidzwa pane ino peji.
Mutengo: $ 59 / mwedzi 13. Kuisa peji rekuvaka
Landing Page Builder inopa akati wandei mamodheru kuyedza uye kugadzirisa. Iyo plugin inouya neMailChimp mafomu ekunyorera kuti ikubatsire iwe kuwedzera huwandu hwevanyori vasina technical technical.
Iyo ine otomatiki email anopindura kukubatsira iwe kubatana ipapo ipapo nevashandisi vanopinda maemail pane peji rako rekumhara. Iyo plugin zvakare inopa SEO chishandiso kwauri kuti uwedzere mazwi akakosha uye madhimoni ekuvandudza yako kumhara peji peji chinzvimbo pane dzekutsvaga injini.
Pakupedzisira, iyi plugin zvakare inopa yakatsanangurwa matemplate emhando dzakasiyana dzemapeji ekumhara, kusanganisira mapeji ekutengesa, mapeji ekumhara uyekunyangwe iwo "anouya" mapeji.
Kuwedzera shanduko nemapeji ekutsika etsika <- Code d'appel à l'action - >
Zvese zviri pamusoro zveWordPress plugins ndiwo makuru esarudzo kugadzira nekushandisa yako saiti peji rekumhara. Verenga zvavo zvakasarudzika maficha uye kugona kuona iyo chaiyo yeyako webhusaiti.
Chinyorwa cheMupepeti: Ichi chinyorwa chakaburitswa muna Ndira 2020 uye chakagadziridzwa kuzara
2021-07-27 19:15:50 | Webhusaiti
Kurumwa kunobatsira iwe kugadzira mavhidhiyo-emhando yepamusoro ayo anoita kuti zita rako rionekwe. mhedzisiro inoshamisa. Zvisinei kana iwe uri mumavhidhiyo kushambadzira, kuyedza kugadzira yemagariro media kushambadzira, kutanga cha...
2021-07-27 19:01:54 | Webhusaiti
Hazvisi nyore kuwana nzira inobatsira yekukudziridza yako ecommerce vateereri kuburikidza neshoko remuromo (iro rinoshanda chaizvo! ) Neraki, iri ndiro dambudziko chairo iro ReferralCandy rinotarisira kugadzirisa. Turnkey chishandiso chinokufamba iwe kuburikidza neiyo SEO maitiro pasina kudikanwa kw...
7 Hubspot CRM kubatanidzwa kuwedzera kutengesa FAST
2021-07-26 23:45:54 | Webhusaiti
Ungade here kubatanidza vatengi manejimendi manejimendi manejimendi (CRM) kunyorera neHubSpot yekuvandudza kufamba kwako uye kuwedzera kutengesa kwako? Aya masanganiswa anovhura musuwo kune zvimwe maficha uye mashandiro auchazoda apo bhizinesi rako richikura. ...
23 akanakisa bootstrap matafura (ronga data) 2021
2021-07-23 14:53:27 | Webhusaiti
Sarudzo hombe yemahara edu emahara uye akanyatsogadzirwa Bootstrap tafura matemplate ewebhusaiti yako kana app. Mushure mekutsvagisa mazana enzira dzemahara dzinowanikwa mumusika, tafunga kugadzira matafura edu. Tine makore eruzivo. 'Ruzivo uye kuyedzwa, tauya nemhando dzakawanda dzinoshanda. Isu ta...
21 yemahara (inonyanya kuchinjika) fomu yekubhukisa matemplate 2021
2021-07-23 14:45:59 | Webhusaiti
Isu tanga tichishandisa yechitatu-bato yemahara yekubhodha mafomu matemplate ekufananidzira, asi paigara paine imwe shanduko yekuwedzera yataida kuita. Kuti tigumise izvo, takasarudza kugadzira edu emahara mapeti. Unogona kuashandisa pane n 'chero e mawebhusaiti ako ane chivimbo Ivo vanouyawo mune e...
2021 yakanakisa yekukasira kudhinda wordpress madingindira ezvese niches uye zvinangwa
2021-07-23 14:33:25 | Webhusaiti
Kana uchisarudza premium WordPress madingindira, kuwana imwe inotakura nekukurumidza kwakakosha. Saka kana kumhanyisa peji kwakakosha kwauri, usaende chero kumwe kunhu. Izvi zvinotevera nekukurumidza kurodha WordPress madingindira ezvese niches uye zvinangwa zvinowanzo sangana nezvido zvako. Yakavak...
37 akanaka akawanda wordpress madingindira 2021
2021-07-23 14:26:50 | Webhusaiti
Uri kutsvaga kuti ugadzire inoshamisa webhusaiti? Aya madhisiki akanaka eWordPress ndizvo chaizvo zvaunoda kuti uzviitire pachena Pane zvakawanda zvinhu zvinopinda mukugadzira webhusaiti: iyo admin UI, masimba ayo, kugona, uye nyore kushandisa. 'Shandisa, uye iwe une yako graphical mushandisi interf...
21 2021 html5 uye bootstrap yemabhatani matemplate
2021-07-23 14:16:38 | Webhusaiti
Unleash the potential of social media using using the best (and coolest) social button templates - for free. Takaongorora mizhinji yemabhatani nemifananidzo zviripo pawebhu, asi isu takanamatira neaya 21 Unogona nyore kuwana maitiro akakodzera nekuda kwe misiyano yeiko kuunganidzwa. Hamire ipapo. Ka...
2021 yakanakisa yakazara yakazara wordpress madingindira anouya nematani ekuwedzera
2021-07-23 14:03:24 | Webhusaiti
Nhasi, kusarudzwa kweakazara-upamhi WordPress madingindira akakura. Premium matemplate, zvishandiso, uye zvinowedzera zvinogona kuita kuti zvive nyore kuvaka nyanzvi yekutarisa webhusaiti wega. Ehe, dhizaini yakagadzirirwa yakagadzirirwa haizokupe rusununguko rwakakwana, asi ine sarudzo dzisingaperi...
30 yakanakisa SEO inoshamwaridzika izwi reshoko reti 2021
2021-07-23 13:44:08 | Webhusaiti
Pane 91% mukana wekuti iwe wawana peji ino neGoogle uchitsvaga "akanakisa SEO WordPress madingindira. " Uye sezvo isu tiri pamusoro peSERPs yezwi rakakosha chirevo, tinonzwa tichimanikidzwa kutaura nezveSEO uye kuti ndeapi madingindira e WordPress anogona kukubatsira iwe kuwana yekutanga peji chinzv...
14 Yemahara Multipurpose Wordpress Themes Kune Chero Webhusaiti 2021
2021-07-23 13:27:55 | Webhusaiti
Shanda pamapurojekiti akati wandei panguva imwe chete neaya eane simba emahara emahara WordPress theme. Dambudziko rese rinogamuchirwa, saka tora chikwereti izvozvi uye unakirwe nemhedzisiro. WordPress rave sarudzo yakasarudzika yevanamuzvinabhizimusi vazhinji uye varidzi vebhizimusi kubvira pakatan...
Yakagadziridzwa ekunze emazwi madhizaini ekuwedzera yako webhusaiti
2021-07-23 13:06:20 | Webhusaiti
Iwe unoda here kuwedzera izvo zvishoma zvekuwedzera kune yako yekunze chiitiko saiti? Nekushandisa anotevera ekunze WordPress madingindira, iwe unotora nhanho yekutanga kuenda kune inobudirira yekunze mhando uye bhizinesi. Kunyangwe iwe uine webhusaiti, iyo yekugadzirisa haina kumbokuvadza. Bhizines...
10 akanakisa emazwi madhizimusi emaraibhurari 2021
2021-07-23 12:56:08 | Webhusaiti
Tora mukana weiyi muunganidzwa weakanakisa madingindira eWordPress emaraibhurari uye tanga chirongwa chako uine chivimbo. Maraibhurari ari kuramba achiwedzera kushomeka mazuva ese nekuda kwekureruka iko iko kuwana ruzivo pa internet. Izvo zvakare zvinokurumidza zvikuru kutora eBook pane kuenda kuchi...
28 akanakisa wordpress kutungamira madingindira e2021
2021-07-23 12:53:17 | Webhusaiti
22 Mahara Vuejs Admin Matemplate Ewebhu Webhu 2021
2021-07-23 12:46:59 | Webhusaiti
VueJS iri kukurumidza kuwana mukurumbira pakati pevanogadzira uye iyo VueJS admin template ndiyo inonyanya kuzivikanwa chikamu. Naizvozvo, isu tinosarudza kukuunzira muunganidzwa weakanakisa emahara View admin dashibhodhi sarudzo dziripo, sewe webhu mushambadzi waunogara uchida kugadzira mapurojekit...